Chlorosis | December 2019
Kaydinta kaydinta iyo kaydinta
Editor Ee Doorashada December 13,2019
Ugu Weyn Ee Chlorosis
Sida loola tacaalo chlorosis dhirta gudaha
Si loo abuuro jawi deggan oo raaxo leh guriga, waxaad si ammaan ah u isticmaali kartaa dhirta gudaha, maadaama ay yihiin qayb muhiim ah oo gudaha ah. Inta badan, saameynta qurxinta sare waxay muujinaysaa nugul iyo nugulaanta cudurada iyo cayayaanka. Mid ka mid ah cudurrada ugu caansan waa chlorosis dhirta, iyo sababaha ay u dhacdo, iyo sida loo doorto daaweynta saxda ah - hadda waan xallin doonaa.
Editor Ee Doorashada
Beat guluubka! Hel daaweyn loogu talagalay waxqabadka sare ee baranbarada
Celceliska nolosha ee lo'da
Maxaynu jecelnahay canabka qoyan, miyuu ku habboon yahay khamri?
Maxay yihiin caadooyinka miisaankoodu yahay nafaqooyinka dhammaan mudada nolosha?
Imisa jeer sannadkii iyo mudo intee le'eg ayaa orchid phalaenopsis at home? Maxaa dhacaya haddii aysan jirin burooyin dheer?
Daryeelka foojarka ee dayrta
Hababka wax ka qabashada xumbada
Noocyo Bacriminta Siberia
Xanuunku wuu dhici karaa
Beerta loo yaqaan 'forsythia'
Sonkeynta beerashada dayrta
Noocyada isteroberi ee Ural
Noocyo canab ah
Geedka abiiga ah ee guga
Currants waa faa'iido ma aha oo kaliya in foomka cayriin, laakiin sidoo kale in jams, macaanka, iyo dhulka oo kaliya iyo la qaboojiyey sonkor. Mid ka mid ah suxuunta degdega ah iyo dhadhan fiican leh ee laga sameeyey berrigan waa jelly macaanka, kaas oo lagu diyaarin karaa kaliya 5 daqiiqo. Sidee dhab ah - u sheegtaa. Ku saabsan faa'iidooyinka of currant madow Berri currant - bakhaarka vitamin C, kaliya 30 miro ama shaaha ka caleemaha qalajiyey ee baadiyaha ku qancin doonaa heerka maalin kasta ee element this jirka ee jirka aadanaha. Read More
Honeysuckle qurxinta: beeritaanka iyo daryeelka
Sidee iyo goorma u codsanayaan doofaarka ka soo horjeeda cowska baradhada
Soosaarka dalaggaBeer cagaaranBeeraha digaagaXoolahaBeertaGuri, guriWarshad ornamental korayaDhirta gudahaNoocyo yaanyoWixii martidaDhismayaashaXakamaynta CayayaankaMaqaalloCanabInfrastructureStrawberriesMushroomsUkraineGeed geedeedkaKhudraddaBaradhadaDaawada dadweynahaBeekeepingWararkaKufsiKu'saabsanViticultureBowCherryMishiinada gaarka ah
Ugu Weyn Ee
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Chlorosis 2019